चटपटे बेचेर पढ्दै, भाईलाई पढाउँदै अनी बिरामी बुवाको रेखदेख गर्दै दिपक ! सम्मान स्वरूप शेयर गरौ ! – Aaj ko Sandesh
मुख्य पृष्ठ /News/चटपटे बेचेर पढ्दै, भाईलाई पढाउँदै अनी बिरामी बुवाको रेखदेख गर्दै दिपक ! सम्मान स्वरूप शेयर गरौ !
चटपट बोए १५ बर्षीय दिपक । दैनिक उपल्लो तम्घासदेखि खानीगाँउ चौडाहासम्म चोक–चोकमा भेटिन्छन् । चटपट मात्रै हैन, बोली पनि मिठ्ठो छ । त्यसैले परैदेखे पनि सबैले चटपट बोए भनेर बोलाउँछन् । उनी चट पट बेचेरै आफु पालिएका छन् । भाईको पालन पोषण र पढाई उनकै काँधमा छ । दिउँसभरमा एक हजारदेखि १५ सयको चटपट बेच्छन् । दैनिक खर्च कटाएर सरदरमा पाँचदेखि सात सय आम्दानी हुने गरेको छ ।दिपक र अर्जुनको घर प्युठान गौमुखी गाउँपा लिका २ अर्खा हो । उनलाई मजदुरीकै क्रममा आमाले तम्घासमा जन्माइन ।दिपक नौ बर्षको हुँदा आमाको मृत्यु भयो । बुबा मानसिक रोगी छन् । तीन बर्ष अघि दिपकले भाई अर्जुनलाई छिमेकीकोमा छोडर वुटवल झरे । विभिन्न होटलमा काम गरेर करिव ५० हजार कमाए । त्यो पैसा बोकेर गत बर्ष फागुनमा तम्घास आए । दुई महिना मुसिकोट होटलमा काम गरे । सोचे जस्तो भएन, त्यो पनि छोडेर भगवति मन्दिरमा कोठा भाडामा लिए । दुई भाईले चटपट व्यापार थाले ।आमासंगै बाल्यकालमै श्रमिक बनेका दिपकले पढ्न पाएनन् । गाउँकै स्कुलमा दुई कक्षासम्म पढे ।
नन्द र भाउजु दुबैजना लाई पालै’पालो क’रणी गर्ने यी हुन् पुजारी बाबा हेर्नुहोस् भिडियो